प्रिय सीबित्री सुबेदी ।
तिमीले हिजो बलात्कार बिरुद्द सडकमा चर्को नारा लगाएर हिँड्दै गर्दा गर्वले फुलेकै हो यो छाती, पेटीकोट लाएर माइतिघर मण्डलामा उत्रिँदै गर्दा ठोकेकै हो सलाम तिम्रो साहसलाई, निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाई पाउँ भनि मुण्डन गरिएको तिम्रो शिरलाई देखेकै हो सगरमाथा भन्दा अग्लो.., तिम्रो सम्मानमा बजाइएकै हो ताली..! तर तिमीले जुन अभिव्यक्ति दियौ टेलिभिजन च्यानलबाट, त्यस्ले तिमीप्रतिको सम्मान सबै सबै सकियो।
हुनत केहि दिन अघि मैले लेखेको स्टाटस तिमीलाई पढ्न लाज लाग्यो भन्दै तिमीले मलाई ब्लक गरेकी छौ र साथै अन्य केहि थान जयनारीहरुलाई पनि त्यसलाई ब्लक गर भनेर आदेश पनि दिएकी रहेछौ।तिमी त्यति सारो साँघुरो सोचको मान्छे हो जस्तो मलाई कदापी लागेको थिएन। कसैसँग बिचार नमिल्दैमा त्यस्लाई स्वीकार गर्न नसक्नु नै ज़िन्दगीमा अधिनायकबाद आउनु हो। फरक फरक बिचारको बीच फुल्न सक्नु पो जीबनको महानता हो त।
अहिले तिम्रो अभिव्यक्तिले बिदेशमा बस्ने ७० लाख युवाहरुको ठाडो अपमान भएको छ। बोल्न पाउने अधिकार छ भन्दैमा यसरी बिदेशमा हाड़ छाला घोटेर रेमिटेन्सले देश धान्ने युवाहरुको इज्जत प्रतिष्ठा माथि हात हाल्न तिमीलाई छुट छ?? जयनारी भन्दै बाटामा गुडुडु कुदेर पेट पालेजस्तो सजिलो छैन बिदेशमा। र तिमीले भनेजस्तो कसैको ओछ्यान तताउने बाताबरण पनि छैन यहाँ।
कतिपय देशमा केटाहरुले केटिहरुको अनुहार समेत हेर्न पाउँदैनन् त केटीहरुले पुरै मुख ढाकेर हिँड्छन् । बिदेशिनु कसैको रहर होईन बाध्यता हो। कस्लाई हुँदैन आफ्नै आँगनमा बसेर घाम ताप्ने रहर, आफ्नै करेसामा मेहनतको कमाई लाउने रहर, साथीभाईसँग साँझ चौतारामा बसेर बात मार्ने रहर अनि बिहानै उठेर आफ्नै बार्दलीबाट आफ्नै देशका हिमालहरु हेर्ने रहर..! आज तिमी आफै हेर ,युवा बिदेशिएको सुनसान गाउँ, रित्तो चौतारो, खाली गोठ, रित्तो किलो, भत्केको घर, खिया लागेको साईकल, बाँझो खेत अनि बृद्द बाउआमा .! रहर हुन्छ कसैलाई यस्तो जिन्दगी बाँच्न???
त्यसैले तिमीले दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लेऊ, माफ़ी माग। मान्छेबाट ज़िन्दगीमा गल्ती हुन्छ। गल्ती नै नगर्ने आजसम्म को होला र दुनियामा?माफ़ी मागेर कोहि सानो हुँदैन! तिमीले धेरै दुख पनि गरेकी छौ, पीडितहरुलाई उद्दार पनि गरेकी छौ। तिम्रो एक अभिब्यक्तिले तिम्रा सयवटा राम्रा पक्षहरुमा आफै पर्दा नलगाऊ! जुन जुन म्यासेजहरु तिम्रो नाममा भाईरल भएका छन् , तिनीहरु माथी स्पष्ट जबाफ देऊ ,भोलि राम्रो काम गर्यौ भने फेरि तिम्रो गुणगान गाउन मै आउने छु। तिमीले भनेकी रहिछौ ज्वाला साबित्री जस्तो बन्न दश बर्ष लाग्छ भनेर।
हो , बिलकुल ठीक भन्यौ। तिमी जे गर्न सक्छ्यौ, त्यो म गर्न सक्दिन , तिमी जस्तो बोल्न सक्छ्यौ म त्यो सक्दिन । हरेक मान्छे आफ्नो अस्तित्वमा बाँच्नु पर्छ र म आफू हुनुमै खुसी छु। राम्रो काम गर्दै जाऊ, जिऊ छोडेर समर्थन गर्छु, तर गलत गर्यौ भने पनि जिऊ छोडेरै बिरोध गर्छु। बिचार हो, समय सँगै बदलिन सक्छ। हिजो टाउकाको मोल तोक्ने र तोकिने प्रचण्ड र ओली त अहिले जुम्ल्याहा पाइलट बनेर देश उडाउँदै छन् भने हामी मिल्नु कुन ठूलो कुरा हो र?